मिठो निद्राका लागि सुत्नुअघि के नगर्ने ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
एजेन्सी । सामान्यतः मानिसहरु खाना खाएपछि एक कफ चिया या कफी पिउन मन पराउँछन् । तर, यदि तपाईंलाई राम्रो निद्रा चाहिएको छ भने यो बानी छाड्नुस् । यदि चियाकफी खानुहुन्छ भने समयमा निद्रा नलाग्ने त छ नै, आएको निद्रा पनि खलबलिने सम्भावना हुन्छ । चिया या कफीमा पाइने क्याफिनले निद्रा भगाउने काम गर्छ । राती सुत्नुअघि खान नहुने खाद्यपदार्थमा चकलेट एक नम्बरमा पर्छ । यसले शरीरमा नकारात्मक असर पार्छ । यसमा चिल्लोपदार्थ र क्याफिनको मात्रा बढी हुन्छ । जसले निद्रामा बाधा पार्छ ।
राती सुत्नुअघि मसालेदार खाना बढी खानाले अनिद्राको समस्या आउन सक्छ । तेल, खुर्सानीजस्ता मसालेदार खाना खाएपछि एसिड रिफ्लेक्सको समस्याका कारण निद्रामा असर पर्न सक्छ । यसैले सुत्नु दुई घण्टा अघि खाना खानुपर्छ भनिएको हो । शरीरलाई हाइड्रेट राख्न र विषालु तत्व बाहिर निकाल्न अधिकमात्रामा पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ । तर, सुत्नुअघि धेरै पानी पिउदा निद्रामा असर पर्न सक्छ । किनकि धेरै पानी पिउनाले राती पटकपटक बाथरुम जानुपर्ने हुन सक्छ । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले छापेको छ ।
यौन सम्पर्कको अवधी कसरी बढाउने ? सिघ्र स्खलन कसरी रोक्ने ? हेर्नुहोस डा. बस्नेतका सुझाव (भिडियो सहीत)
यौनका बिषयमा नेपाली समाजमा खुलेर छलफल र बहस हुदैन । त्यसै कारण पनि धेरै मानिसहरु
स्वास्थ्यका दरबन्दी कटौती भएपछि कर्मचारी असन्तुष्ट
काठमाडौँ, ६ जेठः स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको नयाँ संरचनामा विशिष्ट ज्ञान भएका कर्मचारीको दरबन्दी
महोत्तरी जिल्ला अस्पतालको इमर्जेन्सीमा समेत डाक्टर बस्दैनन् !
गौशाला, ६ जेठः महोत्तरीको जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा रहेको इमर्जेन्सी कक्षमा डाक्टर बस्ने गरेका छैनन् ।
कम्मरमुनिको भाग नचल्ने भएका मन्त्री यादवलाई थप उपचारका लागी थाइल्याण्ड लगिने
काठमाडौँ- उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई थप उपचारका लागि आज थाइल्याण्ड लगिने भएको